«Chris Smalling waxa uu Lionel Messi u dul maray sidii Tareenkii» – Gool FM
«Chris Smalling waxa uu Lionel Messi u dul maray sidii Tareenkii»
(Barcelona) 15 Abriil 2019. Ka hor kulanka habeen dambe dhexmaraya kooxaha Barcelona iyo Man United macallin Naadiga Barca ee Valverde ayaa sheegay in Smalling uu sida Tareenkii u dul maray Messi kulankii lugta hore.
Tababaraha kooxda kubadda Cagta Barcelona ee Waddanka Spain, Ernesto Valverde ayaa mar uu sifeynayay wixii kala qabsaday daafaca Manchester United ee Chris Smalling iyo Weeraryahanka Barcelona ee Lionel Messi waxa uu ku tilmaamay in Smalling uu Messi u dul maray sidii tareenkii.
Ciyaartii labada kooxood ee Man Utd iyo Barcelona ku dhex martay garoonka Old Trafford isbuucii hore ee ku dhammaatay 1-0 oo ay ku adkaatay Barcelona taasoo ahayd lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League waxaa dhaawac isha iyo Sanka uu ka soo gaaray laacibka Barcelona ee Messi kaddib markii uu suxul laqsiiyay Smalling, waxaana la arkayay Messi oo uu sankiisa dhiig ka socdo.
Inkastoo ciyaartaasi uu Messi dhammeystay, haddana waxaa ka muuqday jugtaasi culus, iyadoo habeen dambena labada kooxood ay lugtii labaad ee Quarter-final-ka Champions League ku ballansan yihiin garoonka Camp Nou ee Barcelona.
“Kulanka soo socda in Messi aan fariisinno waa wax aan suurto-gal ahayn, jugtii gaartay ciyaartii hore waxay ahayd mid xoog leh, waxay u dhigantay sida inuu tareen dusha kaa maray.” ayuu yiri tababaraha kooxda Barcelona Valverde oo la hadlayay warbaahinta.
Muxuu ahaa qalliinkii lagu sameeyey Pele kaddib markii lagu soo booday isagoo ku sugan Waddanka Faransiiska?